‘गायक भइरहन गाह्रो’/मनसुधन थापा
Created on Sunday, 30 April 2017 15:14
तपाईचाँही कस्तो गायक हो ?
म यस्तै गायक हो भन्दिन । स्टेजमा, स्टुडियोमा गीत गाउने गायक हो म । त्यस्तो बिछट्टै फरक टाइपको गायक म होइन । तर, गीत निकालेको आधारमा जति चर्चा हुनुपर्ने थियो, त्यति चर्चा नपाएको गायक हुँ भन्न अप्ठ्यारो लाग्दैन ।
जो पनि गायक आजभोली त, गायक बन्न बढो सजिलो छ ?
गायक बन्न त धेरै सजिलो । तर कस्तो गायक बन्ने भन्ने हो । सबै गायक हो आजभोली । घाँस काट्दा गाउने, बाथरुममा गाउने । ट्याक्सी चढ्दा गाउने । बाटोमा हिड्दा गुनगुनाउने । तर, आफू कुन क्याटगोरीको गायक बन्ने भन्ने हो । तपाइले भन्याजस्तो सजिलो चाँही छैन ।
चर्चा नपाएको गायक भन्नु भो, कति निकाल्नु भो र गीत/एल्बम ?
६० वटा जति गीत निकाले । ‘दमौली डुम्रे भन्सार’ ‘जीन्दगी त बग्ने गंगा हो,’ ‘बाडुल्की’ भिसिडि निकालियो । भर्खरै ‘बस्ती पाल्पाको’ निकालियो जुन टेलिभिनमा खुब बजिरहेको छ । दर्शकले असाध्यै मन पराउनु भएको छ । पछिल्लो सयम एल्बम भन्ने चिज हराउन थाल्यो । खाली एउटा गीत निकाल्ने चलन बढ्यो । मैले त्यही अनुसार गीत निकाल्दै आएको छु ।
गायक बन्ने रहर कसरी पलायो ?
गाउँमा सानैदेखी गाउने चलन । कौरा, सालैजो रोदी चल्ने । रेडियो नेपाल क्षेत्रीय प्रशारण केन्द्र पोखरामा ‘देउराली’ कार्यक्रम आउँथ्यो जुन, चर्चित गायक पुरुषोत्तम न्यौपानेले चलाउनुहुन्थ्यो । त्यो कार्यक्रम हिट थियो । मैले पनि बेलाबेला त्यही कार्यक्रममा गीत गाउँथे । २०५२ सालमा एसएलसी दिएपछि मैले पनि रहरैमा मगर भाषाको गीत रेकर्ड गराए । यो गीत रेडियोमा बेसरी बज्यो । पछि एफएम आएपछि त्यसमा पनि बज्न थाल्यो । रेडियोमा गीत बजेपछि गाउँमा गायक भनेर जिस्काउन थाले । त्यसपछि गायक बन्ने रस बस्यो । ख्यालख्यालमै गायक भइयो भनौं ।
फिल्मम पनि खेल्नुभाछ, साच्चि तपाइ गायक हो कि नायक ?
म व्यवसायिक गायकै हुँ । अभिनयमा रहर भएकाले फिल्म खेले । नायक पनि हो भन्न मिल्छ । प्रतिबिम्बमा नायककै भूमिकामा अभिनय गरेँ । भर्जीन, बिन्दासमा पनि अभिनय गरेँ । गायनमा आम्दानी छैन, लगभग जिरो हो । यसो फिल्म देखाइयो भने दुई चार पैसो आउँथ्यो कि भनेर यता लागेको हो ।
नयाँ योजना के छ त ?
अब पञ्जेबाजाको गीत आउँदैछ । कौंरा, सालैजो गीत पनि आउँदैछन् । फिल्मको पनि तयारी भइरहेको छ ।